क्षेत्रकै एक्लो महिला उम्मेदवार र विकास निर्माणका एजेण्डाहरुलाई आत्मसाथ : राजपा - नेता मुन्नादेवी
सुनसरीको राजनीतिको सधै केन्द्र भागमा रहँदै अएका स्वर्गीय अरविन्दप्रसाद मेहताले जुन जुन पार्टीबाट राजनीति गर्नु भयो त्यो पार्टी सधै जिल्लाको राजनीतिमा अग्रपंक्तिमा रह्यो । कांग्रेसबाट राजनीति सुरु गरेर नेकपा एमाले हुँदै मधेसको राजनीतिमा सक्रिय हुनु भएका उहाँ सक्रिय रहेको पार्टी जिल्लामा सधै विजेता रह्यो । अहिले उहाँको राजनीतिक विरासतलाई अघि बढाउन उहाँकी धर्मपत्नी मुन्नादेवी मेहता राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपालबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्नु भएको छ । चुनावी प्रचारलाई तिब्रताका साथ अघि बढाईरहनु भएकी क्षेत्रकी एक्लो महिला उम्मेदवार मेहतासँग गरेको कुराकानी :
अरविन्दप्रसाद मेहता बिनाका निर्वाचन अभियान कसरी चलाईरहनु भएको छ ?
निश्चयनै, म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर चुनावी अभियानलाई अगाडि बढाईरहँदा उहाँको अभाव त खड्किएकै छ तर उहाँले विगतमा सुनसरीको राजनीतिमा खेल्नु भएको भूमिका, योगदान, उहाँले यो क्षेत्रको विकासको लागि गर्नु भएको काम अहिले पनि यहाँको जनताको स्मरणमा ताजै रहेकोले मलाई चुनावी अभियान अघि बढाउन सहज भएको छ । उहाँले २०३८ सालदेखि सुनसरीको राजनीतिमा दिनु भएको निरन्तरता, प्रभाव, विकास निर्माणको काम, यहाँका जनतालाई पीडामा दिएको साथ समर्थन अहिलेसम्म कसैले भुलेका छैनन । अहिले पनि मलाई थाहा नभएका धेरै विषयहरु स्थानीयहरुले नै चुनावी अभियानको क्रममा मलाई स्मरण गराउछन । त्यसैले मैले अरु उम्मेदवार जस्तो परिचय दिईरहनु पर्दैन । कुनै गाउँमा पुग्ने वित्तिकै मलाई पति (अरबिन्दप्रसाद मेहता) को नाम लिएर कसैले बुहारी, कसैले छोरी, कसैले दिदी, कसैले बहिनी जस्ता साईनो लगाएर आफै अगुवाई गरेर मलाई घर घरमा पु¥याएर मत मागिदिनु हुन्छ । म यो चुनावी अभियानको क्रममा हिड्दा आश्चर्यचकित परेकी छु, चुनावी परिणामको चिन्ता मलाई भन्दा पनि स्थानीयहरुमा बढी छ । इनरुवा र इनरुवा देखि दक्षिण भारतको सीमासम्मको क्षेत्रमा मेरो उम्मेदवारीलाई लिएर स्थानीयहरु उत्साहित छन । अझै महिलामा यो उत्साह बढी छ ।
महिलाको कुरा गर्नु भयो, उनीहरुमा कस्तो उत्साह छ ?
यहाँका महिलाहरु शोषित पीडित र प्रताडित छन । उनीहरुले अहिलेसम्म यो क्षेत्रबाट कुनै पनि महिला जनप्रतिनिधि छान्ने अवसर पाएका छैनन । महिलाको पीडा र समस्या महिलाले मात्रै बुझ्न सक्ने भएकोले पनि उनीहरुको महिला उम्मेदवारप्रतिको चासो र चिन्तासँगसँगै देखेकी छु । यो क्षेत्रमा ६७ हजार महिला मतदाताहरु हुनु हुन्छ । तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा उनीहरुले कहिल्यै पनि महिला जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाएका छैन । अहिले मेरो उम्मेदवारीले उनीहरुमा नयाँ खाले आशाको सञ्चार गरेको छ । त्यसैले म गाउँ गाउँ चुनावी अभियान लिएर जाँदा सबैभन्दा बढी महिलाहरुकै सहभागिता हुने गरेको छ । उनीहरु आफै म पुगेको थाहा पाउने बित्तिकै घरको चुलो चौकाको काम छाडेर मलाई साथ दिन आईपुग्छन । अहिले मेरो अभियानमा साथ दिदै हजारौ महिलाहरुले म प्रति समर्थन र साथ ब्यक्त गरिसकेका छन ।
महिलाको समर्थनले मात्रै चुनाव जितिन्छ त ?
त्यस्तो होईन, आधा आकास ओगटेका महिलाको समर्थनको ठूलो अर्थ छ । देशमा भएका परिवर्तनहरुमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । महिलाले अहिलेसम्म खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु महिलामाथिको अपमान हो । तरपनि मलाई सबै समूदाय, वर्ग, लिंगका जनताको समर्थन छ । म उम्मेदवार रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालप्रति रहेको आन्दोलनको लिगेसी, मेरा पति अरविन्द मेहताको राजनीतिक छवी, यस क्षेत्रका महिलाको म प्रतिको भरोसा, मेरो पारिवारिक पृष्ठ भूमि, क्षेत्रकै एक्लो महिला उम्मेदवार र मैले अघि सारेको विकास निर्माणका एजेण्डाहरुलाई यहाँका जनताले आत्मसाथ गरेका छन ।
तपाईको जितको आधार के के हुन ?
मैले अगाडि पनि भनिसकेकी छु , म उम्मेदवार रहेको पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल मधेस, मधेसी, आदिबासी जनजाति, शोषित पीडित र पछाडि पारिएका वर्ग समूदायको अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा निरन्तर लागिरहेको छ । यो तथ्यलाई यहाँका जनताले भुलेका छैनन । नेपालमा यो वर्गको अधिकार कसैले स्थापित गर्न सक्छ भने त्यो राजपा नै हो भन्नेमा कसैको शंका देख्दिन । त्यसैले शोषित पीडितको आन्दोलनको लिगेसी ममा छ । योसँगै सुनसरी जिल्लाको राजनीतिमा जीवनभर सक्रिय रहनु भएका मेरा पति अरविन्दप्रसाद मेहताले यो क्षेत्रको विकासको लागि गर्नु भएको काम, उहाँको राजनीतिक छवी, यस क्षेत्रका महिलाको म प्रतिको भरोसा, मेरो पारिवारिक पृष्ठ भूमि, क्षेत्रकै एक्लो महिला उम्मेदवार र मैले अघि सारेको विकास निर्माणका एजेण्डाहरुलाई यहाँका जनताले आत्मसाथ गरेका छन । यो नै मेरो जितको आधार हो ।
यो क्षेत्रको विकासका कस्ता कस्ता एजेण्डाहरु जनतामाँझ लिएर जानु भएको छ ?
मैले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मानव जनशक्तिको विकास, शसक्तिकरण, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिको विकास आदीलाई समेटेर आफ्नो विकासको एजेण्डा आम मतदाता समक्ष प्रस्तुत गरेकी छु । मैले प्रस्तुत गरेको एजेण्डाहरु यहाँका जनताको आवश्यकता र यथार्थको धरातललाई हेरेर तयार पारेकीले मतदाताहरुले त्यसप्रति विश्वास ब्यक्त गरेका छन ।
एजेण्डाहरु कस्ता कस्ता छन त ?
मैले सुनसरीको दक्षिण भारतसँग जोडिएको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा पर्ने कौवाखोच भन्सारलाई सामान आयात निर्यात गर्ने केन्द्रको रुपमा विकास गर्दै त्यहाँबाट चार लेनको कालोपत्रे सडक धरान हुँदै तिब्बतको बोर्डरसम्म पु¥याएर सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ लाई चीन र भारतविचको ब्यापारीक पुलको रुपमा विकास गर्ने, सुनसरीका प्रमुख धार्मिक र पर्यटकीय स्थलहरु रामधुनी, बराहक्षेत्र, विष्णुपादुका, पिण्डेश्वर, दन्तकाली, बुढाशुब्बा, चतरा र कोशीटप्पू सबै क्षेत्रमा पुग्न सक्ने गरेर सडकसहितको धार्मिक पर्यटकी कोरीडोर निर्माण गर्ने, मेरो परिवारले बनाएको भगवति मन्दिर, भगवति मावी, सत्यनारायण मन्दिर, शिवमन्दिरको भौतिक पूर्वाधारलाई अघि बढाउने, इनरुवाको अस्पताललाई एक सय शैयाको बनाउने, मेरो क्षेत्रको सबै वडामा एम्बुलेन्स, दमकल र बर्थिङ्ग सेन्टर निर्माण गर्ने, सुनसरीका दक्षिणवर्ती क्षेत्रको कृषिको विकासको लागि सुनसरी बाँध बनाउने, कृषकको लागि ३ प्रतिसत ब्याजमा सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्ने, एक गाउँ एक बाली र पशुपालनलाई प्रर्वदन गर्ने जसमा दक्षिण तर्फ गाई र भैसी पालन र उत्तर तर्फ कुखुरा र बंगुर पालनलाई प्रर्वदन गर्ने, १८ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका जनतालाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत सय दिनको काम वा बेरोजगार भत्ता दिने ब्यवस्था गर्ने, एकल महिलालाई जीवन यापन गर्न सक्ने गरी भत्तामा बृद्धि गर्ने र स्वरोजगार बनाउने लगायतका एजेण्डाहरु लिएर म जनतामा गएकी छु ।
जसरी तपाईले चुनावी अभियान अघि बढाउनु भएको छ, के महसुस गर्नु भएको छ तपाईको प्रतिष्पर्घा कोसँग हुन्छ ?
यो क्षेत्रमा मेरो प्रमुख प्रतिष्पर्घीको रुपमा बाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु रहेका छन । अरु कुनै पनि दल र उम्मेदवारसँग मेरो प्रतिष्पर्घा हुने मैले देखेकी छुईन ।
सधै कांग्रेसले जित्दै आएको क्षेत्र हो नि ?
कांग्रेसले जनतालाई झुक्याएर सधै मत पाउँदै आयो तर यो क्षेत्रको लागि कहिल्यै केही गरेन । त्यसको बदला मधेस आन्दोलनपछि जनताले मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका उम्मेदवारलाई जिताएर दिईसकेका छन । पछिल्लो चुनावमा कांग्रेसका उम्मेदवारले भोट देउ कि काठी देउ भनेर जनताको संबेदनशिलतामा खेलेर जित हात पारे तर उनी त्यसपछि फर्किएर पनि गाँउ गएनन । उनले आफूले गरेका बाचाहरु केही पुरा गरेनन । त्यसको आक्रोस यो क्षेत्रका जनतामा देखिन्छ । त्यसैले यसपटक कांग्रेसलाई मतदाताहरुले मत दिदैनन । त्यसैको आधारमा मैले भनेकी हु यसपटक मेरो प्रतिष्पर्घा बामगठबन्धनसँग हुन्छ । अरुसँग हुँदैन ।
विपक्षीहरुको लामो राजनीति इतिहासपनि तपाईको लागि समस्या होला ?
त्यस्तो केही छैन । उमेर पाको भएर मात्रै राजनीतिक इतिहास बन्दैन । म आफै राजनीतिक परिवारमा जन्मे हुकेकी नारी । राजनीतिक परिवारको भएको नाताले मलाई यस क्षेत्रमा कसैसँग परिचित गराईरहनु पर्दैन । त्यसैले मलाई अरु कुनै पनि विषयले फरक पार्दैन ।
तपाईका पार्टीका जिल्ला नेताहरुले पार्टी छाडिसकेकी नि ?
बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । जिल्लाका नेताहरु विभिन्न पार्टीमा गएपनि गाँउका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक र सुभेच्छुकहरु कतै गएका छैनन । उनीहरु मेरो चुनावी अभियानमा दिन रात नभनी अहोरात्र खटिरहेका छन । राजपामा विभिन्न दलहरु मिलेकोले एकीकरणको नाममा जनाधार नभएका नेताहरु पनि ठूलो पदमा पुगे । अहिले तिनै जनाधार नभएका नेताहरु मात्रै अरु पार्टीमा गएका हुन । उनीहरु सधै अवसरबादी थिए, यो बेलामा आएर आफ्नो बास्तविक चरित्र फेरि देखाए । जनताले उनीहरुको ब्यवहारलाई रुचाएका छैनन ।
तपाई उम्मेदवार बनेको पार्टीलाई त मधेसीको मात्रै पार्टी भन्छन नि ?
सबै विपक्षीले मेरो जित सुनिश्चित देखेर छरेको भ्रम मात्रै हो । हाम्रो पार्टीमा पहाडी मुलका आदिबासी जनजातिहरुको ठूलो समूह छ । मेरो क्षेत्रमा आरके खुम्बुले नेतृत्व गरेको पार्टी, तेन्जिङ्ग लामाको ठूलो समूह छन । तेन्जिङ्ग समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार हुनु हुन्छ, त्यस्तै जनजातिबाट प्रदेशसभा सदस्य महिला उम्मेदवार हुनु हुन्छ । दक्षिणतर्फ जसरी मधेसी समूदायको समर्थन उर्लिएको छ । उत्तरतर्फ आदिबासी जनजाति समूदायको त्यती नै ठूलो साथ र समर्थन रहेकोले मधेसी मात्रैको पार्टी भनि प्रचार गर्दैमा कसैले पत्याउने स्थिति छैन । आम जनताले यो कुरा बुझ्नु भएको छ ।
राजनीतिक एजेण्डाहरुलाई कसरी उठाउनु भएको छ ?
हाम्रो पार्टीले उठाएको शोसित पीडित मधेसी, आदिबासी जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित, पीछडिएको वर्गको माग अझै संबोधन हुन सकेको छैन । उनीहरु अधिकार सम्पन्न हुन सकेका छैनन अर्थात शासक वर्गसँग अधिकार समान हुन सकेको छैन । चुनावको कारण यो एजेण्डा सकिएजस्तो देखिएपनि बास्तवमा यो एजेण्डा अझै जिवित छ । यसलाई म जितसँगै जनतालाई साथ लिएर अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनलाई अघि बढाउन भूमिका निर्वाह गर्ने छु । मैले आफ्नो चुनावी अभियानको क्रममा पनि जनतालाई बुझाउँदै छु । हामीलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिने पार्टी नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी सहितका ठूला दलहरु हुन । उनीहरुसँग खोसेर आफ्नो अधिकार लिनु पर्छ । न्यूज अभियानका लागि वर्णमाला दैनिकका साथमा ।